राष्ट्रियसभा उप-निर्वाचन: डा. खिमलाल देवकोटा निर्वाचित « Bagmati Page
राष्ट्रियसभा उप-निर्वाचन: डा. खिमलाल देवकोटा निर्वाचित
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा उपचुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार डा. खिमलाल देवकोटा बिजयी भएका छन् ।
केहिबेर अघि सकिएको मतगणतामा देवकोटाले ५ हजार ८८ मत प्राप्त गरे । त्यस्तै रामबहादुर थापा बादलले ४०४१ मत पाए । बागमती प्रदेशसभाका १०५ सदस्यले मतदान गरेकामा देवकोटाले ५८, बादलले ४५ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कृष्णबहादुर तामाङले २ मत पाए ।
त्यस्तै बागमती प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी २३३ जनाले मतदान गरेकामा देवकोटाले १२८, बादलले १०३ र तामाङले २ मत पाए । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मतभार १८ र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ रहेको छ ।
स्थानीय तह विज्ञ देवकोटालाई माओवादी केन्द्रले प्रस्ताव गरेको हो भने, नेपाली काँग्रेस, जसपा र एमालेको खनाल नेपाल पक्षले समर्थन गरेको थियो । देवकोटा राजनीतिक हिसावले एमाले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निटक मानिन्छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमालेको आधिकारीक उम्मेदवार रामबहादुर थापा भएकाले सुर्य चिन्हमा मतदान गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर प्रदेश ३ का नेपाल खनाल पक्षीय जनप्रतिनिधिहरुले कलम चुनाव चिन्ह लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका देवकोटालाई मतदान गरेर प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीको आदेश अस्वीकार गरिदिए ।
बागमतीमा कांग्रेसका प्रदेश सांसद् २२ र स्थानीय जनप्रतिनिधि ६८ जना गरी ९० जना मतदाताको कुल मतभार २ हजार २ सय ८० रहेको छ । भने माओवादी केन्द्रको सांसद् २३ र स्थानीय जनप्रतिनिधि ३३ जना गरी ५६ जनाको कुल मतभार १ हजार ६ सय ९८ रहेको छ ।